राष्ट्रपति राजाजस्ता भए : संग्रौला | NepalDut
राष्ट्रपति राजाजस्ता भए : संग्रौला
- प्रज्ञा प्रतिष्ठान बंगुरालय
लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले अहिलेको राज्य व्यवस्था पनि परम्पराका सबै लक्षण बोकेर हिडेकाले जनअपेक्षा पूरा नभएको बताएका छन् । उनले वर्तमान राष्ट्रपति पनि राजाजस्तै भएको टिप्पणी गरे । जनआन्दोलनपछि प्रविधिक गणतन्त्र आएको विचार राख्दै उनले अहिलेको राष्ट्रवाद नश्लवादी, गणतन्त्र र समाजवादविरोधी, असमावेशी, विभेदपूर्ण रहेको जिकिर गरे ।
कम्युनिस्ट पार्टीकी सदस्य राष्ट्रपति भएर पनि लालस देखाएको भन्दै उनले व्यंग्य गरे । उनले भने, ‘राष्ट्रपति पनि राजा जस्तै भइन् । नेपाल गरिबहरुको देश हो । दुई तिहाइको कम्युनिस्ट राष्ट्रपतिलाई १८ करोडको गाडी चाहिन्छ । डेढ अर्बको त हेलिकोप्टर आइसक्यो ।’
‘हाम्रा साना दुःखले आज्र्याको मुलुक होइन रे । हाम्रा भनेको कसका शाहका, राणाका ? तपाईंका पूर्खा जुम्रा मारिरहेका थिए ? मदिरा पान गरेर लठ्ठीएका थिए ?
अहिलेको सरकारले भन्ने गरेको राष्ट्रवाद गणतन्त्रसँग नमिल्ने उनको तर्क छ । यो प्रकारान्तरले अधिनायकतावादीतिर गएको उनले संकेत गरे । भने, ‘राष्ट्रवादमाथि प्रश्न उठाउन बहुत गाह्रो हुन्छ । एक किसिमले यो प्रश्न गर्नका निम्ति, विवाद गर्नका निम्ति, विमति जनाउनका निम्त अघोषित रुपमा बर्जित विषय हो ।’
उनले नेपालको प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई बंगुरालयको संज्ञा दिए । उनले भने, ‘बंगुरले खान्छमात्र, संवेदना, विचार केही हुँदैन । प्रतिष्ठान समावेशी हुनुपर्ने हो । इतिहासको अनसुन्धान गर्नुपर्ने हो ।’ राजतन्त्रको प्रज्ञा प्रतिष्ठान र अहिलेको प्रतिष्ठानका तात्विक फरक नभएको उनको भनाइ छ ।
नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलमा म किन राष्ट्रवादी होइन भन्ने शीर्षकमा उनले शासकले मात्र देश बनाएको ढोङ रच्नु विडम्बना पूर्व भएको उल्लेख गरे । ‘हाम्रा साना दुःखले आज्र्याको मुलुक होइन रे । हाम्रा भनेको कसका शाहका, राणाका ? तपाईंका पूर्खा जुम्रा मारिरहेका थिए ? मदिरा पान गरेर लठ्ठीएका थिए ? वा कुम्भकर्णजस्तो ६ महिने निद्रामा थिए ?’
उनले नेपाली दलहरु विचार, दर्शनबाट पतीत हुँदै गएको बताए । उनले भने, ‘कांग्रेस कांग्रेसजस्तो रहेन । कम्युनिस्ट कम्युनिस्टजस्तो रहेन । नेकपाका नेताको चरित्र, संस्कार, जीवनशैली, सम्बन्ध कांग्रेस र मण्डले भनिने राप्रपाको भन्द भिन्न भएन ।’